ZBN Salamo azota fanaovana fitaovana - China Hangzhou Poly Air Separation Fitaovana
Miasa toro lalana: Salamo azota fanaovana fitaovana dia ny mampiasa karbaona toy ny adsorbent molekiolan'ny sivana fandevonana, mampiasa ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption (Salamo) ny fitaovana azota. Teo ambany dia nisy fanerena, ny fampiasana ny azota sy ny oksizenina eny amin'ny rivotra ny diffusion taham ny fahasamihafana eo amin'ny karbonina molekiolan'ny sivana no lehibe kokoa, ny karbaona molekiolan'ny sivana adsorption hafainganam-pandeha dia lehibe noho ny oksizenina azota, oksizenina dia karbaona molekiolan'ny sivana adsorption be dia be, karena ny azota molekiola ao amin'ny T ...
Miasa toro lalana:
Salamo azota fanamboarana fitaovana dia ny mampiasa karbaona toy ny adsorbent molekiolan'ny sivana fandevonana, mampiasa ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption (Salamo) ny fitaovana azota.
Teo ambany dia nisy fanerena, ny fampiasana ny azota sy ny oksizenina eny amin'ny rivotra ny diffusion taham ny fahasamihafana eo amin'ny karbonina molekiolan'ny sivana no lehibe kokoa, ny karbaona molekiolan'ny sivana adsorption hafainganam-pandeha dia lehibe noho ny oksizenina azota, oksizenina dia karbaona molekiolan'ny sivana adsorption be dia be, karena ny azota molekiola ao amin'ny entona dingana, ny fisarahan'ny oksizenina sy ny azota; Mandritra izany fotoana izany ho toy ny karbaona molekiolan'ny sivana oksizenina adsorption fahaiza miovaova amin'ny hafa ny tsindry no manan-danja ny fahasamihafana, mampihena ny adin-tsaina, dia afaka desorption ny karbaona molekiolan'ny sivana adsorption oksizenina, karbonina molekiolan'ny sivana fahaterahana indray, hamerina efa niasa.
Mampiasa roa na mihoatra tilikambo adsorption dingana tilikambo, amin'ny fampiasana ny teknolojia fanaraha-maso ny fandaharana plc tilikambo mba hamokarana azota adsorption, ny tilikambo desorption fahaterahana indray, tsingerina, ny famokarana mitohy ny kalitao avo azota.
, Ambany angovo, milamina fampisehoana, hifanaraka amin'ny zava-mahery, haingana, mandatsa-dranomaso sy ny fahadiovana vokatry ny Adjustable;
Midikiditra amin'ny fiainany andian-tsoratra rafitra famolavolana, fampidirana, fametrahana, mety fandidiana, toerana kely;
, Mora fandidiana, manan-tsaina fanaraha-maso, ary mety tonga saina unmanned asa;
, Poly manam-paharoa toho-tantely ankapobeny fandriana foana amin'izao fotoana izao karazana diffusion teknika, amin'izao fotoana izao dia foana ny rivotra, mba ho azo antoka fa ny molekiolan'ny sivana adsorption fahombiazana;
Special tsindry fitaovana fiarovana, mainka ny fanompoana ny fiainana ny karbaona molekiolan'ny sivana;
Mandany malaza marika ny pneumatic valves, fitaovana hetsika mba hanome ny antoka;
Tsy nahay azota tapaka ho fitaovana mandeha ho azy, mba ho azo antoka ny kalitaon'ny vokatra vita azota;
Ny fahadisoana isan-karazany sy ny aretina sy ny akora fanodinana fiasan'ny;
-Katerena ny olona mikasika efijery-milina interface tsara, adaptive angovo-mamonjy fanaraha-maso sy ny ando teboka tratra, DCS fifandraisana, sns
Azota famokarana: 1 ~ 3000 nm3 / h
Azota entona fahadiovana: 95% ~ 99,999%
Ny tsindry azota: 0.1 ~ 0,8 MPa (Adjustable)
Azota entona ando hevitra: ny 40 ℃ ~ 70 ℃
Previous: ZBO Salamo oxygène niteraka fitaovana
Next: ZBO oksizenina karena setroka fitaovana
PSA Oksizenina gropy
VPSA Vacuum Oksizenina gropy
ZAS fahombiazana avo-menaka ny rano Separator
ZBN-3000E azota fanaovana fitaovana
80 toratelo hafanana paharitry vondrona madinika
ZBO Salamo oxygène niteraka fitaovana